27 | janvier | 2022 | InfoKmada
Archives quotidiennes: 27 janvier 2022
Distrikan’Avaradrano : maro ireo traboina nefa tsy mbola nisy ny fanampiana avy amin’ny BNGRC
InfoKmada - 27 janvier 2022 0
Isan’ireo nitondra takaitra vokatry ny fiakaran’ny rano teto Antananarivo ihany koa ny Distrikan’Avaradrano. Maro araka izany ireo traboina ankoatra ireo tanimboly aman’hektara dibo-trano, etsy ankilany tsy mbola nisitraka ny fanampiana avy amin’ny BNGRC sy ny fitondram-panjakana izy ireo.
Fahavakisana fefiloha : ilaina vahaolana maharitra hisorohana ny faty antoka
Faty antoka goavana no nateraky ny fahavakisan’ireo fefiloha tao amin’ny distrikan’Atsimondrano. Ny ankamaron’ny mponina ao amin’ity distrika ity izay mivlona amin’ny famblena sy ny fiompiana ny ankamaroany. Manoloana io, tokony hisy vahaolana maharitra hisorohana ny fahavakisan’ireo fefiloha hoy ireo ben’ny tanàna.
RN2 : niverina amin’ny laoniny ny fifamoivoizana
Nisokatra afaka andehanan’ireo fiarabe nanomboka androany ny lalana any Moramanga. Tafapetraka ny tetezana vonjimaika « pont bailey ». Nidina tany an-toerana nijery izany androany ny Filohan’ny repoblika. Nambarany tamin’izany fa omena vatsy tsinjo sy tosika fameno avokoa ireo izay tsy mpiasam-panjakana any an-toerana.
Village Voara Andohatapenaka : miisa 4 omaly ireo traboina tsaboina eny an-toerana
Miisa 4 ny traboina tratry ny Covid-19 ka manaraka fitsaboina eny amin’ny village voara omaly, araka ny nambaran’ny teo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamana. Namafisina ny fandraisana an-tanana ireo traboina marary raha ny fanazavana. Mikasika ny fanaovam-baksiny kosa, nanomboka tamin’ny herinandro ny fanatanterahana ny dose boost manerana ny distrika maro eto amin’ny Nosy.
Fandalovan’ny andro Ratsy : 39 ireo namoy ny ainy, 101 461 ireo traboina
Raha ny antotanisa navokan’ny teo anivon’ny BNGRC , mitotaly 39 ankehitriny ireo maty raha toa ka 101 461 ireo traboina manerana ny Nosy tao aorian’ny fandalovan’ny andro Ratsy . Miisa 7 652 kosa ireo toeram-ponenena dibo-drano raha toa ka 58 ireo fantatra fa simba raha ny tatitra nivoaka androany atoandro.